Home News Dhulgariir Qasaaro sababay oo ka dacay Dalka Japan
Dhulgariir Qasaaro sababay oo ka dacay Dalka Japan
Dhul gariir xooggan oo ku dhuftay magaalada labaad ee ugu wayn dalka Japan ee Osaka, ayaa waxaa ay korantida kaga go’day tobonnaan kun guri.
Waxaa sidoo kale dhul gariirkan ku dhintay saddex qof oo ay ku jirto gabar yar oo 9 jir ah iyo nin 80 jir ah.
Dhul gariirkan ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay in ka badan 200 oo qof.
Dhul gariirkaan oo cabirkiisu ahaa 6.1 cabirka dhul gariirada lagu qiyaaso ayaa dhacay xilli ay dadka shaqooyiinka u kalahayeen.
Tobannaan qof ayaa ku xannibmay goobaha tareenada laga raaco.
Waxaa jira warar sheegaya in dhul gariirkan uu waxyeelo gaarsiiyay dhismooyiin iyo dhuumaha qaada biyaha.
Dhul gariirada ayaa ah kuwa ku badan dalka Japan.
Xukuumadda Japan ayaa muddooyiinkii ugu dambeeyay xoojisay xeerarka la xiriira dhulgariirada.
Previous articleSomalida Dal mar rabaan ee Xil ayey Rabaan.
Next articleWasiir Dahir Geelle: “Heshiiskan waa mid Somaliya dan u ah”Su’aashu waa sidee? Ma in nalaga dhigayo killilka lixaad ee Itoobiya ayuu noogu dan yahay?
Hadaladii weerarka ahaa ee la jeediyay ka dib guushii Saciid...
Madaxweyne Deni oo Magacaabay Guddi dabagal